Paul Pogba Oo Sharraxay Farqiga U Dhexeeya Jose Mourinho Iyo Solskjaer - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaPaul Pogba Oo Sharraxay Farqiga U Dhexeeya Jose Mourinho Iyo Solskjaer
Paul Pogba Oo Sharraxay Farqiga U Dhexeeya Jose Mourinho Iyo Solskjaer
April 16, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 1
Xiddig khadka dhexe uga ciyaara Manchester United ee Paul Pogba ayaa weerar ku qaaday tababarihiisii hore ee Jose Mourinho oo maalmihii ugu dambeeyey ay hadallo kulul is weydaarsadeen Ole Gunnar Solskjaer.
Toddobaadkii hore ayey labada tababare isku dhaceen markii uu Solskjaer canaan u jeediyey Heung-min Son kulankii ay Man United 3-1 ku garaacday Tottenham, waxaana ka jawaabay Mourinho oo ku tilmaamay tababare Ole in uu yahay abbe xun.
Arrintan oo la sheegay in xataa ay saamayn ku yeelanayso in United ay lasoo saxeexan karto Harry Kane haddii uu damco in uu ka tago Tottenham, ayaa waxa hadda qayb ka noqday Paul Pogba oo horena arday ugu soo noqday Jose Mourinho.
Xiddiga reer France ayaa dhalliilay qaabka uu Mourinho ciyaartoydiisa ula dhaqmo, waxaanu tilmaamay in mar walba uu yahay mid dagaal kula jira ciyaartoydiisa.
Laacibkan oo Jose Mourinho uu kusoo celiyey Manchester United xilli ciyaareedkii 2016-17 oo uu kasoo bixiyey £89 milyan oo Gini oo uu kaga soo iibsaday, ayaa waxay xilli ciyaareedkooda ugu horreeyey ku wada guuleysteen saddex koob oo laba gudaha Ingiriiska yihiin iyo Europa League.
Laakiin intii uu Jose joogay Old Trafford waxay isku dhaceen qaar ka mid ah ciyaartoydiisa, waxaana markii laga caydhiyey Man United lagu beddelay Jose Mourinho.
Pogba oo ka hadlayay labadan tababare ayaa yidhi: “Waxa aan hadda ku hayo Ole wuu ka duwan yahay, mana aha tababare ciyaartoydiisa dagaal kula jira, dagaalna nalama gelayo.
“Waxa laga yaabaa in Ole aanu ciyaartoyda qaarkood soo xulanin, laakiin kama dhigayo sidii kuwo aan jirin oo kale. Farqiga u dhexeeya Ole iyo Mourinho waa kaas.”
Isaga oo sii wata hadalkiisa, waxa uu intaa ku daray: “Markii aanu xidhiidhka wanaagsan lahayn Mourinho, qof kastaaba wuu arkayay taas, maalinta xigtana ma garanaysid awax dhacay. Waa waxyaabaha layaabka leh ee aan ku arkay Mourinho, mana sharrixi karayo sababtoo ah xataa aniga ayaan garan karaynin.”
asxabey shekadaan meqo maraa nagu soo celiseen ma news kii baa ka dhamaday dunida sportska ?